ठूली एकादशी अर्थात हरिबोधनी एकादशी
जब जब दशैं चाड नजिकिन्छ तब एउटा गीत गुञ्जन थाल्दछ, ‘दशैं नै हो कि यो मेरो दशा…’
यो गीत अहिले दशैंको ‘आईडी सङ’ जस्तै भएको छ । तर, यो गीत भन्नासाथ धेरैको मानसपटलमा गायक योगेश्वर अमात्यको अनुहार आउँछ । संगीतकार न्ह्यू बज्राचार्यको नाम पनि कहीँकतै आउँछ । तर, गीतको शब्द लेख्ने व्यक्ति भने गुमनाम सरह छन् । को हुन् त उनी ?
यो गीतका सर्जक प्रेम बहादुर बस्न्यात बारे सार्वजनिक रुपमा खासै चर्चा सुनिँदैन जो नेपालको पहिलो रंगीन चलचित्र कुमारी (०३३) का निर्देशक हुन् । उनले ५७ वर्षअघि (वि.संं २०२१) पटकथा तथा निर्देशनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका थिए ।
प्रेमबहादुर बस्न्यात एक बिहान चाबहिलस्थित घरबाट गुह्येश्वरीतिर मर्निङ वाकमा निस्किएका थिए । दशैं नजिकिँदै गरेको समय थियो । उनीभन्दा अगाडि दुई जना मानिस आपसमा कुरा गर्दै हिँडिरहेका थिए । उनीहरु एउटै गाउँका छिमेकी रहेछन् ।
तीमध्ये एक जनाले दशैंमा गाउँकै अर्का मान्छेसँग खसी आधा-आधा बाँडेर खाने गरेको रहेछ । तर, त्यो वर्ष आधा खसी लिने मान्छेको घरमा जुठो पर्‍यो । एक्लै सिंगै खसी खाने हैसियत भएन् । त्यो बह उनी साथीसँग पोखिरहेका थिए । दुवैको कुरा खुब चाखले सुनिरहेका प्रेमलाई झ्वास्स लाग्यो, दशैं मान्न चाहिँ नेपालीहरुलाई गाह्रै पर्दो रहेछ !
आम नेपालीलाई चाडबाडले थिचेको पीडा कहाँ कसरी पोखूँ भनेर उनलाई छटपटी भइरह्यो ।
घर आएर चिया खाँदै उनले गीत लेखे, ‘दशैं नै हो कि यो मेरो दशा…’
त्यो बिहान गीत लेखि सक्नासाथ योगेश्वर अमात्य उर्फ योगीलाई फोन गरे । जागिरे जीवनमा प्रेमको बानी थियो, संगीतकर्मीहरुलाई क्लबमा भेला गराएर बार्बिक्यु गर्दै गीतको महफिलमा रम्ने । त्यसै क्रममा योगीसँग चिनजान र निकटता भएको रहेछ ।
लेख्दालेख्दै उनलाई यो गीत योगेश्वर अमात्यलाई फिट हुन्छ भन्ने लाग्यो । आफैंले गुनगुनाउँदै लेखिरहँदा ‘टाउको खाएको’ भन्ने उच्च पीडा योगेश्वर अमात्यकै गलाले दर्शाउन सक्छ भन्ने सोच आयो । तुरुन्तै फोन गरे ।
– ‘मैले तिमीलाई आज भेट्नुपर्‍यो’, उनले योगेश्वर अमात्यलाई भने, ‘एउटा गीत लेख्या छु ।’
– ‘के रे ? दाइले गीत लेख्या रे !,’ योगेश्वर अमात्य छक्क परे ।
– ‘तिमीले नपत्याको ? इनिग्मा (कान्तिपथमा रहेको रेष्टुरेन्ट)मा आऊ तिमी ।’ इनिग्मा त्यतिबेला उनीहरुको जक्सन जस्तै थियो ।
बिहान ११ बजे भेट्ने समय तय भयो । योगेश्वर अमात्यले संगीतकार न्ह्यू बज्राचार्यलाई पनि भनेर सँगै ल्याएछन् । ‘मैले गीत पढेर सुनाएँ, दुवैले एकदम मन पराए’, उनले सम्झिए । गीतभित्र संवादहरु देखेर उनीहरु झन् दंगै परे ।
त्यसपछि नजिकै रहेको न्ह्यूको डोरेमी संगीत पाठशालामा पुगे तीनै जना । न्ह्यूले पाँच मिनेटमै धुन तयार पारे । हुन पनि जम्मा दुई लाइनको थियो गीत । अरु त संवादहरू थिए ।
‘यस्तो फरक खालको स्वादमा संगीत गरेको पहिलो र एकमात्र गीत यही हो,’ संगीतकार न्ह्यूले अनुभव बताए ।
कतिपयले यसलाई ‘न्यारेटिभ पप सङ’ को उपमा दिए पनि न्ह्यू त्यस्तो कुनै नाम दिन चाहँदैनन् । यो गीतमा संयोगै संयोग जोडिएको छ । न्ह्यूले योगेश्वरसँग काम गरेको पहिलो गीत यही रहेछ । प्रेमको पनि रेकर्ड भएको जीवनको पहिलो गीत यही हो ।
गीतमा योगेश्वर अमात्यले गायन सम्हाले भने संवादको भाग हास्य कलाकार दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले पूरा गर्ने भए ।
‘अनौठो संयोग छ यो गीतको,’ प्रेमले रोचक सन्दर्भ सुनाए, ‘त्यही दिन लेखिएको गीत त्यही दिन संगीत भरेर त्यही दिन रेकर्ड भयो ।’
गीत रेकर्ड चाहिँ जेम्स प्रधानको स्टुडियो म्युजिक वर्क्समा गरियो ।
मुख्य दुई हरफ रहेको गीतभित्र अरु ‘फिल इन’ हरु छन् । जसमा एउटा परिवारभित्र श्रीमती र छोराछोरीहरूका एकपछि अर्को ‘दशैं-फर्मायश’ सुनेपछि घरमुली हैरान भएर सुस्केरा पोख्छ ।
उनलाई गीतको बीचमा संवाद हाल्ने विचार कसरी आयो त ?
‘खै, कसरी आयो, मलाई नै थाहा छैन । मैले कहिल्यै गरेको काम पनि होइन । अनुभव नभए पनि दशैंको पीडा दर्शाउने क्रममा संवाद आए होलान्’, प्रेमले उतिबेलाको सन्दर्भ सम्झिने प्रयास गर्दै भने ।
गीत रेकर्ड भएर आएपछि निकै लोकप्रिय भयो । दशैंको बेला त एफएम रेडियोहरुबाट बजिरहने गीत बन्यो । तर, गीत चले अनुसार प्रेमबहादुर बस्न्यात को कुनै नाम सुनिँदैन् । दशैंमा दीनदुःखी नेपालीको पीडा झल्काउने गीतका गीतकार उपेक्षामा परेर आफैं पीडित भए जस्तो लाग्छ ।
यसमा पनि उनलाई कुनै गुनासो रहेनछ । ‘मैले यसबाट केही चाहेकै होइन । म जस लिएर हिँड्ने खालको मान्छे होइन । एउटा मुडमा लेखेर सुनाउँदा गायक र संगीतकारलाई मन पर्‍यो । रेकर्डिङ भएर सुन्न पाइयो । यतिमै खुशी छु’ ।